7 Toerana mora vidina indrindra any Eropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 7 Toerana mora vidina indrindra any Eropa
Ny sasany amin'ireo fomba fijery tsara indrindra any Eropa dia tsy voavidim-bola ary mora azo. Na izany aza, a trip to Europe can get quite expensive if you don’t plan in advance. While most European capitals will stretch your travel budget, misy toerana vitsivitsy dia lavitra any Eropa izay mora vidy tanteraka. Ny tamponay 7 ny ankamaroan'ny toerana mora vidina any Eropa dia tsara teti-bola ary tsy hihoatra ny 50 € isan'andro isan'andro.
Ireo vatosoa miafina ireo dia tsy latsa-danja lavitra amin'ny hatsarana sy majia, avy eo ny tanàna toa an'i Paris sy Berlin.
1. Toerana mora vidy indrindra any Eropa: Cologne, Alemaina
Raha lafo dia lafo i Alemana, Cologne dia iray amin'ireo toerana mora vidina indrindra any Eropa. Manomboka amin'ny toeram-ponenana mahasoa amin'ny tetibola ka hatrany amin'ny mari-pamantarana malaza sy fitaterana mora vidy, Cologne tokoa a fiatoana tanàna lehibe Safidy raha mandeha irery ianao na manomana fitsangatsanganana Euro ho an'ny fianakaviana.
Ity tanàna alemanina ity dia misy labiera Kolsch, mba hahafahanao manandrana sakafo matsiro alemanina amin'ny € 1.30 ihany. Tsy misy zavatra tsara kokoa noho ny mankafy pint amin'ny moron'ny reniranon'i Rhein mahafinaritra, rehefa afaka andro iray tao an-tanàna. Hamarino tsara fa mamakivaky an'i Ficshmarkt hahazoana snap toy ny carte postales miaraka amin'ireo trano miloko ary manohy hatrany amin'ny Old Town, Altstadt.
Ankoatry ny, ny mari-toerana malaza indrindra any Alemana, malalaka ny katedraly Cologne mahafinaritra hitsidika. Ny maritrano Gothic, varavarankely fitaratra nolokoina, ary ny fahitana ny renirano dia epic. Raha tia kanto ianao, avy eo manana an'i Cologne tranombakoka lehibe na kanto an-dalambe mahavariana ao Ehrenfeld. Ity faritra ity dia ny faritra andilana sy lava any Cologne, ny-handeha-to-toerana ho an'ny kafe sy antitra.
Araka ny ahitanao an'i Cologne dia tanàna mahaliana amin'ny teti-bola mahaliana ho any Eropa. Ambonin'izany rehetra izany, ny zavatra tsara indrindra momba izany dia ny fitaterana mahomby sy mora vidy. Fitaterana alemanina, lalamby fiaran-dalamby, ary ny fiara fitateram-bahoaka dia mahazo aina sy mahomby tokoa, noho izany dia mamonjy anao mandehandeha be dia be ny fotoana manodidina. Ny fahazoana fiaran-dalamby isan'andro na isan-kerinandro dia fomba tsara iray afa-bola mandritra ny diany.
Berlin ny vidin'ny lamasinina Aachen
Vidin'ny lamasinina any Frankologie mankany Cologne
Dresden mankany amin'ny vidin'ny lamasinina Cologne
Aachen mankany Cologne Train Prices
2. efa nampiasaina, Belzika
Waffles ho an'ny sakafo maraina ary vonona hijery ireo rehetra ianao 80 tetezana sy ny faritry ny fitiavana, Minnewater. Bruges dia a tanàna medieval mahafinaritra any Belzika ary iray amin'ireo toerana mora vidy indrindra hitsidihana an'i Eropa. Manomboka amin'ny trano mimanda maro be hatramin'ny a mitaingina sambo amin'ny lakandrano, misy zavatra mora vidy be azo atao ao Bruges, mitaingina lamasinina avy any Bruxelles.
Raha te-hiparitaka kely ianao, dia tokony handany fotoana sy ampahany amin'ny teti-bolanao isan'andro amin'ny sôkôla ianao. Tadiavo ny famantarana ‘vita tanana’ 50 ny fivarotana sôkôla ao an-tanàna ho an'ny sokola Belzika tsara indrindra.
Ny haben'ny kelin'i Bruges sy ny fandrindrana ny tanàna dia mora jerena an-tongotra, ka tsy tokony handany fotoana amin'ny fitaterana ianao. Raha ny tena izy, fomba iray tsara hijerena ny tanàna sy hianarana momba ny kolontsaina sy ny lova dia amin'ny fidirana amin'ny fitsangatsanganana an-tongotra maimaimpoana. Amin'ity fomba ity dia azonao atao ny mahazo ny toro-làlana anatiny rehetra amin'ny trano fisakafoanana mora vidy, fiantsenana fahatsiarovana, ary ny fomba tsara indrindra hitsidihana ireo manintona lehibe.
Vidin'ny lamasinina mankany Amsterdam mankany Bruges
Bruxelles mankany Bruges Train Prices
Antwerp mankany Bruges Train Prices
Ghent mankany amin'ny vidin'ny fiaran-dalamby Bruges
3. Toerana mora vidy indrindra any Eropa: Czech Krumlov, Repoblika Tcheky
Ny Repoblika Tseky dia iray amin'ireo toerana mora vidina indrindra any Eropa, ary noho izany dia ao amin'ny lisitray ny tanàna mahafinaritra an'i Cesky Krumlov. Ity tanàna maroloko ity dia mpizaha tany ary mpiorina indrindra, teti-bola-friendly. Ho hitanao fa tena mora ny mijery sy misitraka ny nahandro Czech, drafitra labiera, ary fitsangatsanganana nefa mandany saika tsy misy ny teti-bolanao.
Voalohany indrindra, fisakafoanana any ivelany dia tena mora vidy, ary afaka mahita menus sakafo atoandro mahafinaritra ianao izay manolotra fanombohana, lehibe indrindra, sy labiera ho an'ny vidiny mahatsikaiky. Ny labiera dia mora vidy kokoa noho ny rano manerana ny Repoblika Tseky ary atambatra amin'ny saosisy namboarina, nahazo sakafo hariva tsara ianao.
Ity tanàna ity koa dia tranon'ny trano rantsankazo sy zaridaina mahavariana izay afaka tsidihana malalaka, ary raha te hiakatra hijerena epic epic ianao, avy eo ny saram-pidirana mankany amin'ny tilikambo dia kely noho ny 5 Euro. Safidy lehibe hafa hijerena ny tanàna ny fidirana amin'ny fitsangatsanganana an-tongotra maimaimpoana ary hihaona amin'ireo mpandeha hafa na hamandrihana a Fitsangatsanganana an-tanànan'ny tanàna tsy miankina Cesky Krumlov ho an'ny andian-jiolahy. Amin'izany no ahitanao ny tsiambaratelon'ny tanàna, angano, ary torohevitra hananana fitsangatsanganana mahafinaritra any amin'ny tany angano.
Ny vidin'ny Nuremberg mankany Prague Train
Ny vidin'ny Munich mankany Prague
Vidin'ny Berlin hatrany Prague
Vidiny hatrany Prague Train Priises
4. Eger, Hongria
Hongria dia iray amin'ireo firenena mora vidy indrindra any Eropa, ary mbola betsaka ny zavatra azo jerena noho i Budapest. Eger dia tanàna mahafinaritra, misy loharano mafana, Bukk Hungary's valan-javaboary, ary mari-toerana tsara hitsidika. Misy ireo fahagagana rehetra ireo nefa tsy manimba ny teti-bolanao.
I Eger dia iray amin'ireo tanàna malaza any Hongria ary fonenan'ny divay mena matsiro, hita eo anelanelan'ny tendrombohitra Bukk. Fijery mahafinaritra fomba fijery voajanahary natao ho an'ny toerana tonga lafatra divay Tsiro aorian'ny andro fitsangantsanganana mahafinaritra ao amin'ny valan-javaboary Bukk tsara ary miala sasatra amin'ny loharano voajanahary. Satria i Hungary dia misy loharano voajanahary tsara indrindra any Eropa, milomano ao anaty thermals dia tsy maintsy tanteraka.
Eger dia mety amin'ny faran'ny herinandro spaoro miala sasatra avy any Budapest. Ny safidy eo anelanelan'ny dia iray andro na fitsangatsanganana an-tanàna avy ao Budapest dia anao avokoa, saingy mamporisika ny handany farafahakeliny faran'ny herinandro lava eto amin'ity tanàna mahasarika ity izahay.
5. Toerana mora vidy indrindra any Eropa: Cinque Terre, Italia
Trano miloko marevaka, mipetraka eo akaikin'ny Sentiero Azzurro tsara tarehy, ataovy fahagagana italianina i Cinque Terre. Cinque Terre dia iray amin'ny toerana mora vidina indrindra any Eropa sy Italia. Tsy misy na inona na inona mampitaha ny fahatsapana fa mandeha tsara sy haingana eo anelanelany 5 toerana mahavariana. Ity fomba fitsangatsanganana ity dia mamonjy fotoana sy vola be dia be amin'ny karatra fiaran-dalamby Cinque Terre.
Raha ny amin'ny toeram-ponenana, ny fanaovana La Spezia ho fototry ny dia dia safidy tsara. Tanàna seranana italiana tsara tarehy misy trano fandraisam-bahiny sy hotely maro hisafidianana.
Cinque Terre lasa be atao sy lafo mandritra ny vanim-potoana avo. Ary noho izany, tsara kokoa ny mitsidika eo anelanelan'ny aprily-jona mandritra ny fahavaratra na oktobra-novambra mba hankafy ny hatsarany voajanahary amin'ny fararano.
La Spezia mankany Riomaggiore Train Prices
Ny vidin'ny fiaran-dalamby any Florence mankany Riomaggiore
Modena mankany Riomaggiore Fiarandalamby
Livorno mankany Riomaggiore Train Prices
Trano ho an'i Mozart, Maritrano baroque, Schonbrunn Palace, ary ny maze maintso, Masina i Wina. Na dia mety hilaza aza ny sasany fa lafo io, ny fitsangatsanganana any an-drenivohitra Aostraliana dia azo tanterahina tanteraka ary tsy hianjera lavitra amin'ny tetibolan'ny dia isan'andro any amin'ireo renivohitra eropeana hafa toa an'i Prague na Budapest. Mahafinaritra ny fizahan-tany ny tanàna, mba hahafahanao mankafy ny kolontsaina manankarena, nahandro, sy ny hatsaran'ny fiainana Viennese, tsy manimba ny tahiry ainao.
Ny renivohitra Australiana dia iray amin'ireo toerana mora vidy indrindra hitsidihana an'i Eropa, misaotra ny fifanarahana ara-mpizahatany. Ohatra, ny Card Vienna dia hahazo fihenam-bidy lehibe amin'ny tranombakoka, attractions, ary fitateram-bahoaka. Ankoatry ny, azonao atao ny manandrana strudel Viennese tsara indrindra amin'ny trano fisakafoanana mahatalanjona any Vienna, amin'ny sakafo atoandro. Trano fisakafoanana sy kafe maro no manolotra a 2-3 lisitry ny napetraka ho an'ny latsaky ny 10 €.
Ho an'ny alina tsy misy kolontsaina sy mozika, kafe maro no manana fampisehoana mozika mivantana maimaimpoana. fa, raha ny masonao dia mijery amin'ny alina amin'ny opera malaza, dia tokony hanana ny masonao hijery ny tapakila hanaovana fampisehoana maharitra ianao, satria mora vidy kokoa noho ny tapakila opera mahazatra izy ireo.
7. Toerana mora vidy indrindra any Eropa: Normandie, Frantsa
Morontsiraka volamena, angano an'i Joan of Arc of Ruen, ny nosy Mont St.. Monasiteran'i Michel, dia vitsivitsy monja amin'ireo vatosoa ao Normandy. Ity faritra mahafinaritra ity dia dia adiny roa miala an'i Paris, fa tsy toy ny renivohitra frantsay, io no iray amin'ny toerana mora vidy indrindra eto Frantsa.
Normandy no malaza indrindra amin'ny morontsiraka fiantsonan'i WWII. Na izany aza, itoeran'ny hantsam-bato any Etretat, vatolampy vatosokay goavambe, fahagagana voajanahary mahatalanjona. Ilay tanàna Scenic Giverny izay nonenan'i Claude Monet sy nandoko ny lisy malaza dia toerana iray hafa tsy tokony hialana aminao dia mankany Normandy.
Hamaranana, ny dia any Eropa dia mety ho traikefa nahafinaritra tokoa. Normandie, Cinque Terre, Vienna, Eger, efa nampiasaina, Cologne, ary Cesky Krumlov, dia 7 toeran-kaleha takiana hivezivezena any Eropa. Ny toro-hevitra omenay dia hitazona anao tsy handany ny ainao amin'ny andro fialantsasatra tokana ary hiantohana fa manana dia lavitra tsy hay hadinoina sy manokana ianao.
Vidiny any Paris mankany Rouen Train
Vidiny any Paris mankany Lille
Rouen mankany amin'ny vidin'ny fiaran-dalamby Brest
Rouen mankany Le Havre Train vidiny
eto amin'ny Save A Train, we will be happy to help you plan your vacation to the most affordable places in Europe by train.
Te hampiditra ny lahatsoratray bilaogy “Toerana 7 mora vidina indrindra any Eropa” ve ianao amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url =ny https://www.saveatrain.com/blog/most-affordable-places-europe/ ‎- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)